Maamulka dawladda hoose ee Hargeysa oo bilaabay olole dhir beerista caasimada Hargeysa
Hargeysa, Somaliland, July 10,2016 (DDH)- maamulka dawladda hoose ee Hargeysa, ayaa sheegay inay bilowday toddobaadka ololaha dhir beerista ,isla markaana ugu baaqeen ganacsatadda iyo dadweynaha inay guryaha hortooda ku beertaan dhir.
Maayarka magaalada Hargeysa, Cabdiraxmaan Maxamuud Caydiid Soltelko, ayaa meheradaha iyo guryaha ku amray in dhir beertaan,isla markaana laga shaqeeyo kor u qaadidda bilicda caasimadda.
Maayarka caasimadda oo wasiirka Arriamaha gudaha ka gudoomaya boqol geed ayaa madashii ka sheegay in ay hadda bilaabmeen toddobaadka ololaha dhir beerista, isagoo la sheegay in la ganaaxi doono qofkii dhirtii uu beeray waraabi waaya.
Maayarka Caasimadda oo ka hadlaya ololaha dhir beerista toddobaadkan ayaa yidhi “Labo biloodo ka hor ayaanu ku dhawaaqnay todobaadka dhir beerista, waxaana maanta noo bilowmay toddobaadkii ololaha dhir beerista, waxaan u mahad naqaynaa wasiirka Arrimaha Gudaha Cali Maxamed Waran-cadde oo noogu deeqay boqol geed oo lagu bilaabi doonno, marka waxa waajib ah in qofkasta oo meherad leh uu geed beedho, guri kastana geed laga hor beero si deegaan cagaaran oo dhir leh oo bilic leh u noqono, in badan ayey gacmahayagu laabnaayeen dib u laabnaan maayaan, subax walba ka ay soo maraan malishiibiyadda iyagoon la waraabin waa la ganaaxi doonaa”.
Ka dibna waxa maayarka Caasimaddu shahaado sharaf siiyey wasiirka Arrimaha gudaha oo ay ku maamuseen sida uu ula shaqeeyo iyo taageeradda uu mar walba la garab taagan yahay dawladaha hoose.
Waxa iyaguna halkaasi ka hadlay xoghayaha dawladda hoose, agaasimaha arrimaha bulshadda iyo xildhibaan Xasan Shahar oo dadweynaha ugu baaqay in guryaha iyo meheradaha hortoodda lagu beero dhir.
Sidoo kale, wasiirka Arrimaha Gudaha Cali Maxamed Warancadde, ayaa isna boqol geed ugu deeqay dawladda hoose ee Hargeysa.
Wasiirka ayaa sheegay in meherad kasta iyo guri kasta laga rabo in geed lagu beero, isla markaana ganaax iyo xadhig la iskugu dari doono meheradii iyo gurigii daryeeli waaya geedkaasi la beeray ee hortoodda ku yaalla.